Ngwakọta Anticancer ọhụrụ na-ekwe nkwa
Location: Mbido » Ịdee » Ozi waya » Ngwakọta Anticancer ọhụrụ na-ekwe nkwa
Ọrịa cancer so n'ihe na-ebute ọnwụ n'ọtụtụ mba ma na-eji nke nta nke nta na-aghọ ibu arọ n'ahụ ọha mmadụ. Otu n'ime isi ihe ịma aka nke usoro ọgwụgwọ na-emepụta iji lụso ọrịa a ọgụ bụ na ọgwụ kwesịrị ịkwado mkpụrụ ndụ kansa naanị ma nwee mmetụta ole na ole dị ka o kwere mee. N'ime ọtụtụ ogige ndị a na-enyocha ugbu a, njikọ nke boron dipyrromethene (BODIPY) na metal-organic macrocycles (MOCs) na metal-organic frameworks (MOFs) na-egosi ikike dị ukwuu ọ bụghị nanị ịlụso ọrịa cancer ọgụ nke ọma, kamakwa inyere ndị nchọpụta aka ịghọta. ọrịa ka mma.
N'ime akụkọ nyocha na nso nso a nke e bipụtara na Coordination Chemistry Reviews, otu ndị ọkà mmụta sayensị nke Prọfesọ Chang Yeon Lee na Gajendra Gupta nke Incheon National University, Korea, kwurịtara banyere evolushọn na ọganihu na-adịbeghị anya n'ọhịa nke BODIPY dabeere na MOCs na MOF, na a. gbado anya na ọrụ nwere ike ime ka ogige ahụ dị ka ma ọgwụ mgbochi ọrịa kansa yana ngwaọrụ maka nyocha ọrịa kansa. Akụkọ ahụ na-akọwa uru dị iche iche nke ogige ndị ahụ yana mmekọrịta ya na usoro ahụike ndị ọzọ ma na-ekwupụtakwa isi ihe mgbochi ụzọ na ngwa ha zuru ebe niile.
Ya mere, gịnị bụ ihe ndị a na ihe na-eme ka ha dị mma nchikota? MOC na MOF bụ igwe igwe na-arụ ọrụ dị ka nyiwe dị iche iche nke enwere ike iwebata ọrụ ọhụrụ n'ụzọ dị mfe site na mgbanwe. A na-eji ha abụọ eme ihe n'ọtụtụ ebe na biomedicine ma gosipụta ike dị ka ndị na-egbochi ọrịa cancer nwere ezigbo nhọrọ. Otú ọ dị, mgbe a na-eji BODIPY na MOC ma ọ bụ MOF, njirimara fotophysical nke ogige a na-arụpụta nwere ike ịdị mma nke ọma iji nweta mmetụta dị iche iche.
Nke mbụ, ogige ndị dabeere na BODIPY bụ ezigbo fotosensitizing ndị ọrụ maka ọgwụgwọ photodynamic, nke a na-eji ọkụ na-arụ ọrụ ọgwụ iji bibie sel ndị e lekwasịrị anya. Mgbe ejikọtara ya na MOC ma ọ bụ MOFs, ịdị irè nke ogige ndị a ka ọgwụ mgbochi ọrịa na-abawanye. Nke abụọ, ogige ndị dabeere na BODIPY na-enwe mmetụta maka acidity (pH) nke ọkara. Ebe ọ bụ na ụfọdụ etuto ahụ dị njọ na-enwekarị pH dị ala (acid), ogige ndị a nwere ike imeziwanye ya ka ọ bụrụ naanị mkpụrụ ndụ kansa n'ime ahụ site na iji usoro a. N'ikpeazụ, mana n'ezie ọ dịghị ihe ọzọ, enwere ike ịhazi njirimara fluorescent nke MOC na MOF ka enwere ike nyochaa ọnọdụ ha n'ime sel n'ụzọ dị mfe site na iji usoro microscopy fluorescence. "Mfe dị mfe nke ịchọta ọgwụ MOC/MOF dabeere na BODIPY n'ime mkpụrụ ndụ ọrịa cancer a na-agwọ ga-enyere ndị ọkà mmụta ihe omimi na cell aka ịghọta usoro ihe omume nke ụmụ irighiri ihe ndị a na-eme megide ọrịa cancer," ka Prof. Lee na-akọwa.
N'agbanyeghị ụfọdụ njedebe nke MOC / MOF dabeere na BODIPY, dị ka nchịkọta na-ewe oge na nghọta anyị na-ezughị ezu banyere nsị ya, ogige ndị a nwere ike ịghọ ndị isi egwuregwu n'ọgụ anyị na-alụso ọrịa cancer ọgụ. "MOCs na MOF ndị e haziri na BODIPY nwere atụmatụ niile dị mkpa achọrọ iji bụrụ ezigbo onye nyocha ọgwụ mgbochi ọrịa," Prọfesọ Gupta kwubiri. Jide n'aka na ị ga-eleba anya maka ụmụ irighiri ihe ndị a dị elu na ihe ebube ha nwere ike iwetara ụwa ọgwụgwọ ọrịa kansa na nyocha.
Ọzọ na: Incheon
Jeju Air na-agba mbọ maka ụgbọ elu na ụzọ ọhụrụ na-aga Guam Incheon|
Ọtụtụ Elavil (amitriptyline) na APO-Amitriptyline chetara n'ihi adịghị ọcha nitrosamine.
Ngwakọta Cannabis na-adịghị ahụkebe egosipụtara iji gbochie ọrịa Covid-19
Ndị isi okwukwe mba ụwa na-ezukọ na Saudi Arabia nke mbụ...
Agha Russia na-ebuso agha na Ukraine furu Egypt...
Ahịa Ahụike Behavioral na-agba akaebe maka ire ere dara ada na...